Myanmar (Burmese) translation | Multilang.space
Hello, how are you မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Is there anyone? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
I love you really so much ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
How much does this hamburger cost? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Can You call meataxi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
I am sorry ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
I am interested ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
My flight was delayed အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
I am here for business ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Hello, my name is မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
I am sorry, but I am married ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
I would like to ask you ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Can you take me to the airport? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
What is the time right now, please? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Where is the nearest police station? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Can I borrow your phone charger please? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Can you help me? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Order meadrink, please? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
How much does it cost? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
I'm allergic to gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Calladoctor ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Is thereadoctor? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Can I haveacall? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Call me your boss please. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
This place is very nice ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Take me to the hotel please ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
What is my room number? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?